Deeq A.'s Content - Somali Forum - Somalia Online
Everything posted by Deeq A.
Somaliland ministers test positive for COVID-19
Authorities in the breakaway region of Somaliland have announced that two ministers have tested positive for coronavirus. Health ministry in the region announced they had registered 26 new infections in the previous 24 hours bringing the total confirmed cases to 358. The ministry also said 48 patients have so far recovered from the disease and a total of 22 people have succumbed to it since its outbreak in the region. Somaliland minister of investment Mohamed Ahmed (Awad) said he is one of the two ministers who tested positive for the disease. The minister announced his infection in a post published on Twitter on Monday. “I have tested positive for the disease after showing mild symptoms, my condition is stable and I don’t feel any pain,” said on twitter Waxaan sameeyey Baadhitaanka caabuqa Covid19, jawaabtuna positive bay noqotay Xaaladayduna way fiican tahay. Wax xanuun ah oo aan dareemaya ma jirto #Somaliland #COVID19 — Mohamed Ahmed (Awad) (@CAWADAYN) June 1, 2020 The announcement in the region comes a day after the country’s health minister announced 47 new cases. The latest cases come amid concern about the sharp surge in the number of confirmed cases in Somalia due to limited capacity to contain the spread of the virus because of the fragile healthcare system. The World Health Organization (WHO) has warned that if the virus transmission is not slowed down rapidly, the patient surge and increasing demand for health care will overwhelm the country’s fragile health system. WHO said in its latest report on COVID-19 that Somalia will need to make difficult decisions to balance the overwhelming demands of responding to COVID-19, while maintaining essential health service delivery to prevent health systems from collapse. Somalia has instituted measures to contain the possible spread of COVID-19 including closing schools, banning large gatherings and suspending international and domestic passenger flights.
Trump oo ku hanjabay tallaabo xasaasi ah xilli rabshadaha Mareykanka ay faraha ka baxayaan
Washington (Caasimada Online) – Madaxweyne Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu amri doono ciidamada militariga inay la tacaalaan dibad-baxyada rabshadaha wata ee lasii degaya gobollo badan oo ka mid ah Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu kumanaan askari usoo diri doono waddooyinka caasimadda, wuxuuna ku hanjabay in sidoo kale gayn doono gobollada aan awoodin inay xakameeyaan xaaladda. Hadalka Trump ayaa yimid toddobaad kadib markii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo aan hubeysneyn lagu dilay magaalada Minneapolis kadib markii askari caddaan ah inta madaxa dhulka u dhigay, kadibna luqunta jilib ka saaray illaa ay nafta ka baxday. Kadib markii lagu cambaareeyey inuu ka aamusan yahay xasaraddan kasii daraysa, ayaa Trump waxa uu khudbad uu kula hadlay shacabka ka jeediyey Aqalka Cad, xilli booliskuna ay dibad-baxayaal ku sugnaa banaanka u adeegsanayeen sunta dadka ka ilemysiisa. “Waxaan dirayaa kumanaan iyo kumanaan ciidamo aad u hubeysan ah, shaqaale milatari iyo saraakiisha hirgelinta sharciga, si ay u joojiyaan rabshadaha, bililiqada, burburinta hantida iyo weerarka,” ayuu yiri madaxweyne Trump. Waxa uu cambaareeyey rabshado habeen ka hor ka dhacay Washington, oo uu ku qeexay “ceeb buuxda”, wuxuuna ugu baaqay barasaabyada gobolka inay si deg deg ah uga howlgalaan inay si awood leh “u maamulaan waddooyinka.” “Haddii magaalo ama gobol uu diido inuu qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah inay difaacaan nolosha iyo hantida dadkooda, waxaan keeni doonaa militariga Mareykanka, waxaana si deg deg ah ugu xallin doonaa dhibaatadan.” Hadalka Trump ayaa durba la kulmay cambaareyn xooggan. “Waxa madaxweynaha uu maanta sameeyey ayaa ah inuu militariga Mareykanka ugu wacay shacabka Mareykanka,” waxaa sidaas twitter ku yiri barasaabka New York, Andrew Cuomo. AFP + VOA
Askari ka tirsan booliska magaalada Las Vegas ayaa ka mid ahaa laba qof oo lagu toogtay halkaas maalintii Isniinta ahayd, sida ay warbaahinta dalkaas sheegtay. Warbixin oo lagu qoray wargayka the Las Vegas Review-Journal ayaa lagu sheegay in booliska magaaladaas ay xaqiijiyeen in askariga lagu toogtay huteel agtiisa. Madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay inuu dirayo milatari kala eryi karo xasiloonidarrada ay shacabku ka wadaan dalka Mareykanka oo dhan, mudaharaadyadaasi oo ka dhashay dilki loo geystay nin madow ah oo booliska gacantooda ku jiray. Wuxuu Trump sheegay maamullada magaallooyinka iyo baraasaabyada gobollada iney ku guul dareysteen xakameynta mudaharaadyada iyo “iney difaacaan shacabka” sidaa darteed uu ciidama milatari oo rabshadahaasi soo afjaro inuu howlgelinayo. Mudaharaadyada looga soo horjeedo dilka loo geystay George Floy ayaa maalinti toddobaad ka socda dalka Mareykanka. Xilliga uu Mr Trump aqalka cad warbaahinta kula hadlayey, boolisku waxay sunta indhaha ka ilmeysiisa ku kala eryeen boqollaal mudahaaradaayl ah oo mudaharaad halkaasi ka waday. Isniinta shalay ahaydna waxaa si rasmi ah loo shaaciyey baaritaankii la sameeyey in lagu ogaaday dilka loo geystay Mr Floyd inuu ahaa mid bareer ah. Goobjoog News Source: goobjoog.com
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor qoor oo ku sugan Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegay in maamulkiisa uu dadaal badan uu ku bixin doono sidii Maleeshiyaadka tira badan looga qaadi lahaa hubka. Madaxweynaha ayaa sheegay in ay doonayaan in ay mideeyaan Awoodda maamulka Galmudug, islamarkaana Maleeshiyaad beeleedyadda loo badali doono Ciidamada Daraawiishta iyo Booliska maamulka Galmudug. “Galmudug maanta waxaan ka xareyneynaa hubka gacmaha Gooni goonida ah ku jira oo aan awooda Mideyneyno , awoodaasi iyo Hubkaasi waxaan ku dhalin doona Nabadeynta degaanada ka Galmudug iyo ka hortagga dagaal beeleedyada”ayuu yiri Madaxweyne Qoorqoor. Dhinaca kalana waxa uu shaaca ka qaaday in qorshahaan hubka dhigista uu sii soconayo,si galmudug nabadeedu u xoogeysato. Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu wareejiyay Maleeshiyaad iyo hubkii ay wateen isaga oo shaaciyay in kuwa kalana sidaas oo kale loogu wareejin doono. Goobjoog News Source: goobjoog.com
Qoor-Qoor oo ku dhawaaqay qorshe xasaasi ah oo uu rabo inuu ka fuliyo GALMUDUG
Gaalkacyo (Caasimada Online) – Madaxweynaha maamulka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye ( Qoor-Qoor ) oo ku sugan Gaalkacyo ayaa shaaciyey in maamulkiisa uu hub ka dhigis ku sameyn doono maleeshiyaadka ku sugan gobollada Galgaduud iyo Mudug. Qoor-Qoor ayaa sheegay inay la wareegi doonaan hubka ku jira gacmaha gooni-goonida ah, si loo xasiliyo amniga deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay Qarameyn maleeshiyaadka hubeysan, kuna biirin doonaan ciidamada daraawiishta iyo kuwa booliska ee maamulkaasi. “Galmudug maanta waxaan ka xareyneynaa hubka gacmaha Gooni goonida ah ku jira oo aan awooda Mideyneyno , awoodaasi iyo Hubkaasi waxaan ku dhalin doona Nabadeynta degaanada ka Galmudug iyo ka hortagga dagaal beeleedyada.” ayuu yiri Qoor-Qoor. Hadalkaan ayaa ku soo aadaya, iyadoo maalmihii dambe wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi uu dadaallo xoogan ka waday Mudug, isagoo lagu wareejiyey maleeshiyaad iyo hubkii ay wateen oo ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee gobolkaasi. Arrintaan ayaa haddii ay Galmudug sii wado, islamarkaana ay dhaqan-geliso waxa ay soo afjareysaa colaadaha ka jira gobollada Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha dalka.
Al-Shabaab oo shaaciyay inay qarax ku dishay askar Kenyan ah
Kismaayo (Caasimada Online ) – Faah faahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee qeybta howlgalka AMISOM lagula eegtay qeybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose ee K/ Soomaaliya. Qaraxa oo ahaa nooca miinada ee dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lala bartilmaameedsaday kolonyo ay la socdeen ciidamadaasi, xilli ay marayeen deegaanka Husingow oo ka tirsan gobolkaasi, sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal. Dhinaca kale Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qaraxaasi ayaa shaacisay inay ku dishay 2 askari, sidoo kalena ay ku dhaawacday 2 kale oo ka tirsan ciidamada Kenya. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay Al-Shabaab oo lagu baahiyey baraha Internet-ka ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi qaraxa loo adeegsaday ay ku gubeen gaari ay lahaayeen ciidamada milatariga dowladda dalka Kenya, sida ay hadalka u dhigeen. Illaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Kenya ee AMISOM ka tirsan iyo sidoo kale kuwa dowladda oo ku aadan qaraxaasi miino. Al-Shabaab oo weli ku xoogan gobollada Jubbooyinka ayaa inta badna weerar jidgal ah ku qaada ciidamada huwanta, xilliyada ay isaga kala gooshayaan gobolladaasi.
Wasiirka maalgashiga iyo hormarinta Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku shaaciyay in laga helay fayraska COVID-19 ka dib baaritaan lagu sameeyay. Mr Cawad ayaa sheegay in haatan xaaladdiisa caafimaad ay tahay mid wanaagsan isaga oo xusay inuusan jirin wax xannuun ah oo uu dareemayo. Dhanka kale Soomaaliland ayaa maanta oo ah Talaado 02-06-2020 waxa ay sheegtay in deegaannadeeda laga helay kiisas la xiriira safmarka Coronavirus ka dib markii baaritaan lagu sameeyay dad looga shakiyay xanuunka oo gaaraya 1401 qof. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo soo saaratay warbixinta maalin laha ah ayaa sheegtay in 24-kii saac ee la soo dhaafay in cudurka COVID-19 laga helay 26 qof, iyada oo sidoo kale shaacisay in xanuunka maanta ka bogsadeen 8 bukaan, halka 24-kii saac ee la soo dhaafay uu hal ruux u geeriyooday caabuqan. Tirada guud ee ka bogsatay Coronavirus gudaha Soomaaliland ayaa ah 48 qof iyada oo guud ahaan xanuunkan ay u geeriyoodeen 22 ruux. Guud ahaan Soomaaliland waxaa cudurkan kiisaska laga helay ay gaarayaan 358 kiis. Goobjoog News Source: goobjoog.com
Siciid Deni iyo Karaash oo kulan xasaasi ah ku leh magaalada Garoowe
Garoowe (Caasimada Online ) – Wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada Garoowe ayaa sheegaya in haatan Madaxweynaha maamulka Puntland, Siciid Deni iyo ku xigeenkiisa Axmed Karaash uu kulan xasaasi ah uga socdo xarunta baarlamaanka ee magaaladaasi, kadib markii ismimada maamulkaasi ay ku guuleysteen inay isu-keenaan. Kulankan ayaa ah mid lagu dhex-dhexaadinayo labada adhinac, si ay xal uga gaaraan khilaaafka xoogan ee muddooyinkii la soo dhaafay u dhexeeyey. Isimada Puntland oo markasta u istaaga xalinta khilaafka madaxda sare ee maamulkaasi ee haatan xalinta wada ayaa waxaa ka mid ah, Islaan Ciise Islaan Maxamed, Garaad Saleebaan Garaad Maxamed, Boqor Cabdullaahi Axmed Cali Daba-gooye, Ugaas Maxamuud Cabdullaahi Ciise Nuur iyo Suldaan Siciid Maxamed Garaase, kuwaas oo dhex-dhexaadinaya mas’uuliyiintaasi. Sida qorshuhu yahay waxaa kulanka hadda socda lagu soo afjari doonaa khilaafka hareeyey Madaxweynaha Puntland iyo Madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi oo maalmihii u dambeeyey si aad ah looga hadal hayey deegaanada maamulkaasi. Khilaafka labada nin ayaa bannaanka yimid kadib markii 14-kii bishan May uu madaxweyne kuxigeenka ka soo horjeestay magacaabista taliyaha iyo taliye kuxigeenka madaxtooyada Puntland oo uu magacaabay madaxweyne Deni. Mudane Karaash ayaa sheegay in aan lagala tashan magacaabistaasi. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa toddobaadkii hore sheegay in khilaafkooda uu gaaray heer aysan hadda saalanta iska qaadin labadan mas’uul oo ku wada shaqeeya dhismaha madaxtooyada Garowe.
Kenya Airways plans to resume passenger flights from June 8. While domestic airlines in Kenya like Safarilink, Air Kenya and even Kenya Airways's subsidiary Jambojet will remain on the ground until the movement restrictions in and out of Nairobi, Mombasa, Kwale and Kilifi counties remain in place, according to transport cabinet secretary James Macharia. Source: Hiiraan Online
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir, Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) oo wareysi dheer bixiyey ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda dalka, gaar ahaan maqaamka Muqdisho. Ugu horreyn Madaale ayaa si weyn u dhaliilay kuraasta 7 xubnood ee loo qoondeeyey in gobolka Banaadir uu ku yeesho Golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa xusay in matalaadaasi ay tahay mid aan ku dhisneyn dadka waxa ay muddan yihiin, islamarkaana aan laga fiirsan. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu u arko arrintaasi qalad la galayo, ayna adkaan doonto in beri la saxo, sida uu hadalka u dhigay. Waxaa kale oo uu intaasi ku daray in weli maqaamka Muqdisho kor loo sii hayo, islamarkaana la siyaasadeynayo xaqa shacabkeeda oo uu carabka ku dhuftay inay yihiin kuwa bixiya canshuurta ugu badan, sidoo kalena ay heysataan dhibaatooyin is-biirsaday. Hadalkaan ayaa ku soo aadaya, iyadoo si aad ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ay uga falceliyeen go’aankii ay soo saareen guddiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo lagu shaaciyey in gobolka Banaadir uu 7 xubnood ku yeelan doono Aqalka Sare, islamarkaana lagu soo xuli doono nidaamka beelaha ee 4.5. Halkaan hoose ka dhageyso codka. https://www.caasimada.net/wp-content/uploads/2020/06/Cod-Madaale.mp3
https://goobjoog.com/wp-content/uploads/2020/06/VIDEO_SHEIKH_ALI_WITH_LOGO_ENG2.mp4 Source: goobjoog.com
Maamulka gobalka Banaadir ayaa ka joojiyay taakuleyntii uu siin jiray macallimiinta iyo guud ahaan iskuulka 15 May ee magaalada Muqdisho. Warqad uu ku saxiixanyahay guddoomiyaha gobalka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud kuna taariikheysan 21-05-2020 oo ay heshay Goobjoog News ayaa lagu yiri “Wasaaradda waxbarshada hiddaha iyo tacliinta sare oo ay warqaddani sida tooska ah ugu socoto, waxaan si xushmad leh iyo qaddarin leh idiin la socodsiineynaa maadaama wasaaraddu joojisay howlihii 15 May gabi ahaanba, maamulka gobalka Banaadirna wuxuu sidoo kale idiin caddeynayaa inuu joojiyay heshiiskii labada dhinac ahaa ee tixraaca sare ku xusan iyo dhaqaalihii maamulka gobalka Banaadir ku bixin jiray iskuulka 15 May” Arrintan ayaa daba socota waqad ka soo baxday wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya 7-March ee sanadkan laguna hakiyay howlihii iskuulka 15 May. Sida ay ogaatay Goobjoog News in ka badan 1000 ardey ayey saameyn doontaa heshiiska ay wasaaraddu laashay ee ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Masar. Goobjoog News Source: goobjoog.com
Bulshada Oo U Dheg Taagaysa Natiijada Dagaalka Siyaasadeed Ee Baashe Iyo Faysal Iyo Halka Uu Saldhigan Doono
(SLT-Hargeysa)-Waxa taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhex dhalatay guddoomiyayaasha UCID Faysal Cali Waraabe iyo golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax. Guddoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyay guddoomiye Baashe inuu yahay caqabada hortaagan inay doorashadii golaha wakiiladu dalka ka qabsoonto, waxa kale oo uu eeddo u jeediyay guddoomiye Baashe iyo xildhibaano kale oo ka soo jeeda gobalka Sool. Guddoomiye Baashe oo ka jawaabay eedaynta Faysal, ayaa isna soo qaaday weerar siyaasadeed oo kale, waxaanu guddoomiye Faysal ugu hanjabay in goluhu soo saari doono xeer murashixiinta madaxtinimo ee dalka ka mamnuucaya inay saddex goor u tartamaan madaxweynenimo. Guddoomiye Baashe, wuxuu yidhi “Faysal wuxuu ka hadlay doorasho, wuxuu yidhi Baashe wuxuu diiddan yahay in la diwaangeliyo Dadka Sool iyo Sanaag, Anigu doorasho ma diiddan oo waanu rabnaa, wayna dhacaysaa. Aniga iyo Faysal doorasho iskuma hayno, waxaanu isku haynaa wax aanan Anigu shaqo ku lahayn oo ah wax Golaha oo dhami qabeen, Xisbiyada mid walba 21 kun oo dollar baa la siinayey si Xisbiyada loo kobciyo, waxay ku soo beegantay markii Xanuunka Kuududiyuhu dalka haystay, markaa Xildhibaannada waxa u muuqatay inay Xisbiyada ku badan tahay in 21 kun oo dollar la siiyo, markaa Xildhibaannadu waxay garteen in Lacagtaa xisbiyada 50% looga gooyo Cisbitaallada, markaa ta uu faysal igu haystaa waataa, Anigu lacagta kama goynin ee Golaha oo dhan bay u taallay, haddii Ilaahay yidhaahdana Lacagtaasi Miisaaniyadda waa la wada jarayaa.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey “Isagu wuxuu ku fadhiyaa (Guddoomiye-nimad UCID) wuxuu ku fadhiyaa Xeer anagu aanu qornay, Annaguna waxaanu ku fadhinaa Dastuur, markaa haddii uu ka waantoobi waayo guddoomiye Faysal, Guddoomiye Xisbi sidan uu yahay ku ahaan maayo, saddex doorasho ayuu galay saddexdiiba wuu dhacay, wuxuu doonayaa inuu mid afraad (galo) waxaanu ballan-qaadaynaa inaanu mid afraad isku taagin.” Hanjabaada guddoomiye Baashe oo aan la garanayn inuu kaga *****n doono ayay dad badani la sugayaan furitaanka kalfadhiga golaha wakiilada oo dad badani sugayaan in la furi doono badhtamaha bishan June. Si kastaba ha ahaate, haddii ay golaha wakiiladu hirgeliyaan xeerkaas murashixiinta madaxweynaha ka mamnuucaya inay saddex goor tartamaan, waxa siyaasadda Somaliland ku iman kara isbedel aan la filayn. Source
Sheekaddi Dhex Martay Mr Mucaarid Iyo Mr Muxaafid. Laba nin oo midna muxaafid yahay midna mucaarid yahay oo weligood saaxiib ahaa ayaa iyagoo beryhaa is arag balamay si ay bal u wada qadeeyaan oo u sheekaystaan. Iyagoo makhaayaddaa cuntada fadhiya waxaa soo quud daraynaysa Bisad aad u dhuubatay ama caatoowday oo ay diif faro badani ka muuqato. Halkii sheeko xiiso lihi labaddii nin ku dhex maraysaa, waxaanay u dhacaysaa sidatan: Mr Mucaarid : Waaryaahee saaxiib ilaa Bisadihii ayaa dalkii ku bakhtiyey intii aad xukunka qabsateen. Mr Muxaafid: Waar imika barwaaqo ayaabu dalkii ku jiraa oo waa kuwan roobabku da’aye garan maayo halka Bisadan xumi ka timid. Malaha waa mid Muqdisho inagaga timidba. Mr Mucaarid: Horta Bisadahu ma dooga ayeey cunaan muxuu roobku u tarayaa haddii dadkii busaaradsan yahay oo aanay xoolaba qalaneynin. Kuwii horaaba idin dhaamayba. Mr Muxaafid: Waar dalku meel fiican buu marayaa ee idinku ma xafladihii iyo dhagax dhigii iyo indho sarcaadkii baad u haysataan horumar. Mr Mucaarid: Waar kuwii hore xataa Sheekh Aadan Siiro oo mucaarid weyn ku ahaa ayaa imika qiraya inay idin dhaameen oo uu dalku kala socday oo laba meelood saddex meelood ahaan ay dalka ku soo celin jireen. Idinka xataa kuwii wasiiradda idiin ahaa baa idinku dul bakhtiyaya. Ma waxaanay Bisadaasi bakhtiyin baa oo dadkii baa sideeda ku socdee. Malaha xaaladda dalkaba kama war haysaan. Mr. Muxaafid: Horta iyada Bisadani waa qaran dumis oo iyadda qaar qaranimadeena ka soo horjeedda ayaa ku adeegta ee sheekadeeda ee inaga daaya. Adeer dalka kuwii xoreeyey baa haystee la qabsadda. Mr Mucaarid: waar ileyn dalka kelidiin maydaan xoreyne kuwan aad leedahay waxbay xoreeyeen ma daacadnimay u xoreeynayeen mise way xoreysanayeen. Mida kale wixii laga dagaalamay sowtan dib loogu noqday. Qoladaynu la dagaalanay iskuulo bilaasha iyo caafimaad bilaasha iyo biyo bilaasha ayeeynu haysanaye, horta halkaynu ku soconay. Mr Muxaafid: waar horta maxaa marka mid anaga ahi uu xukunka u qabsado aad u waalataan. Adeer markiina suga raggii ina xoreeyey baa kursiga ku fadhiyee suga markiina. Mr Mucaarid: Uu wuxuba ma intanay ahayd? In kolba mid inaga ahi uu kolba ka atooreeyo oo dhalinyaradeenana qabyaalad lagu kala qaybiyo oo aynu kolba mid la safano oo la yidhaa maanta reer hebel baa haysta iyo waa reer hebel markoodii. Waar qaranimaddii aynu dadka dalkan inala leh ku lahayn aynu wada doonano ma waxay maraysaa in Bisadihii ay qaran dumis noqdaan. Dee malaha iyagana ha la soo xidho beri dhow baa ku xigta. Mr Muxaafid: Waar sowtii Layna laayey ee aynu ka dagaalanay ee aynu maanta Ilaahay mahadii dalkeenii haysano maxaa inaga maqan. Nimco ayeeynu ku jirnaaye. Mr Mucaarid: Hadda ogow 30 sano ku Koonfur baynu wax wada lahayn. 30 sano inagaa keligeen is xukumaynay oo rabnay inaynu dawlad noqono. Hadaba intii danbe dib baynu u soconaa. 30 sanadood in aynu meel fog ku gaadhno ayeey ahayd. Laakiin kula yaabi maayoo inaan kugu xiiqaba maaha oo dhalinyaraddii ayaa la kala qaybiyey oo nimankan ina haystaa waa ragaynu berigii dagaalka u baahneyn laakiin 30 sanadood ka dib maaha raggii aynu u baahneyn maanta ee dagaalkan cusub iyo caalamkan cusub ee aynu wax ka doonayno Rag ina hogaamin kara ayeeynu u baahan nahay sida ninka Itoobiya iyo xitaa Soomaalidan ina wareerisay sida Kheyre, Deni, Mustafe Cagjar, Farmaajo kuligood waa dhalinyaro dad ina hogaamin kari lahaa sidooda ayeeynu inaguna u baahan nahay haddii kale halkaasi ka dhaqaaqi mayno; Mr Muxaafid: Waar dalkan kuwii xoreeyey baa haysta maanta cid uga lexejeclo badana ma joogto oo dadkan qurbaha ka yimid baa dalkii waalaya ee kuwaa inala joogay ee garanaya waxaynu galno iyo waxaynu gudno inoo daaya. Mr Mucaarid: Horta dalkan waa laynala leeyahay ee reerkeenan oo keliyi ma laha mid usoo dagaalamay iyo mid aan u soo dagaalamin iyo mid dagaalkii dhinaca kale ahaaba. Ka adeer inala joogay ee aan caalamkaba garaneynin muxuu inooga soo goyni maba garanayo siduu caalamku uba shaqeeye. Waar dalkan Qurbo-joogga goormaynu ka yeelanay miyaanay ahayn kuwii ina soo biilinayey ee dalkan 30 sanadood xoogooda iyo dhididkooda ku dhisayey ee dagaalkiina afka, adinka iyo dhaqaalahaba ku dagaalamay. Malaha iyaguna waa qaran dumis sida bisadaasoo kale hadday yidhaahdaan dalka sidan ha laga daayo. Mr Muxaafid: waar qolooyinkiinan xaasidnimo ayaa idinku jirta dalkuna meel fiican buu marayaa, waanu garanaynaa adigoo miidhan oo xataa Xamar laga soo diray si aad dalka u burburiso. Mr Mucaarid: Waar bal intaanan qaran dumis aniguna noqon sida Bisadan oo aydaan ii xidhin aan iska aamuso malaha waxbaa ka salag lehe. Waar bal aakhiruun xasuusta anigu waanigan iskaba aamusaye. Source
MOGADISHU (HOL) - Two Kenyan registered airlines have been struck off the register of licensed companies to operate in Somalia after they illegally transported khat to Somalia against a government ban on the product. Source: Hiiraan Online
Ayax Ku Habsaday Somaliland Oo Dhibaato Badan Gaadhsiiyay Beeralayda
(SLT-Hargeysa)-Ayax aad u fara badan oo beryahanba laga dayrinayay in uu ku faafo dalka ayaa laga soo sheegayaa in uu ku habsaday dhul baaxadiisu dhan tahay 12700 hector dhamaanba goboladda Somaliland. Ayaxasi oo ka dilaacay korontii uu dhalay Ayaxii bishii June ee sanadkii hore Somaliland oo dhan ku habsaday. Isagoo Ayaxu sida caadiga ah Ugaxaantiisa ku aasa meelaha xeebaha ah. Koronkorta uu Ayaxu dhalo waxay dilaacdaa soona baxdaa wakhtiga Gu’ga ama xiliga uu roobku da’ayo. Waana xiliga ay bilaabaan dadka beeralayda ahi u diyaar garoowga tabcashadda wax-soo-saarka beeraha. Waxaana sanadkan isku soo beegmay xiligii ay beeralaydu u diyaar garoobayeen tabcashadda dalagyadda wax-soo-saarka iyo Ayaxii oo dilaacay. Wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed, oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ku tilmaamay Ayaxani aafo dhibaato ku noqday wax-soo-saarkii beeralayda iyo dhul daaqsimeedkiiba. Waxaanu yidhi, “Todobaadkii u danbeeyay waxaa na soo gaadhaya fariimo ay noo soo dirayaan dadweynaha deegaamadda uu Ayaxu ku habsaday. Warbixinihii ugu danbeeyay ee laga helayo waaxda la dagaalanka Ayaxa ee wasaaradda beeraha Somaliland ayaa tilmaamaysa in maanta uu Ayaxaasi ku fadhiistay dhul baaxadiisa lagu qiyaasay 12700 hector, marka la isku geeyo guud ahaanba Somaliland oo dhan, meelahaasoo u badan meelihii wax-soo-saarka”. Wasiir Seed, waxa kaloo uu faahfaahin ka bixiyay goboladda ay ka tirsan yihiin meelaha uu sida daran u saameeyay Ayaxu. “Goboladda uu aadka u saameeyay waxaa ka mida gobolka Awdal, Maroodijeex, Gabiley, Togdheer, Daadmadheedh, Sool, Sanaag iyo Sarraar. Awdal meelaha uu aadka u saameeyay waxaa ka mida degmadda baki, Fiqi Aadan, Daba-dilaac, Xariirrad. Gobolka Maroodijeex meelaha uu aadka u saameeyay waxaa ka mida gegmadda Salaxley. Geesta kale dad badan ayaa is waydiinaya ka hor intii aanu Ayaxu sidan u faafin sababta ay wasaaradda beeraha iyo xukuumaduba uga diyaar garoobi waayeen ama qorshe uga yeelan waayeen, maadaama oo la saadaalinayay in ay korontii uu sanadkii hore Ayaxu ka tegay ay dilaacayso. Hase yeeshee wasiirka beeraha Somaliland oo su’aashaas ka jawaabayay ayaa ku dooday in ay qorshe ka yeesheen ka wasaarad ahaan, balse heerka uu hadda Ayaxu marayaa ay tahay aafo aanay u maarro haynin. “Dhibaatadan Ayaxa, ka hor intii aanu na soo gaadhin ayaanu rabnay in aanu ka sii tabaabulshaysano. Laakiin, imika waxaa yimid wax anaga awoodayadda ka wasaarad ahaan aad nooga badan” ayuu yidhi Axmed Muumun Seed. Dhinaca kale Axmed Muumin Seed, waxa uu sheegay in qaar ka mida hay’adaha caalamiga ah ee ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda in ay qaarkood ka soo jawaabeen dalabyadoodii. Waxaanu yidhi, “Hay’adahaasi oo ay ka mid tahay FAO, oo ah hay’adda keliya ee sida dhaw ula shaqaysa wasaaradda beeraha Somaliland, Bisha Cas oo laba gobol ee Sool iyo gobolka Awdal oo Xarriirad ah, iyo Fiqi-aadan iyo Daba-dilaac oo ay hadda ku jiraan. Hay’adda World Vision oo Oodweyne dhawaan ka shaqaysay. Hay’adda WHH iyad-na Awdal deegaamo ka tirsan ayay dhawaan ka hawl gashay, iyo Oxform oo iyad-na nala shaqaysa”. Source
Cadho Ka Dhalatay Wiil Falastiini Ah Oo Ay Toogteen Booliska Israa’iil
(SLT-Qudus)-Boqollaal qof ayaa ka soo qaybgalay aaska nin Falastiiniya oo xaalada Austismka qabay oo ay toogteen booliska Israa’iil xilli uu u socday goob uu ka helo waxbarasho gaar ah. Iyad Halaq, 32 jira ayaa sabtidii lagu dilay daanta bari ee qudus ee ay Israa’iil haysato isagoo ku socday dugsi dadka baahiyaha gaarka ahi ay tagaan Booliska Israa’iil ayaa sheegay inay ka shakiyeen in Halaq uu hub sitay isla markaana uu diiday amarkii la siiyey ee ahaa inuu istaago, kadibna la ogaaday inaanu hubaysnayn. Wasiiraka gaashaandhiga ee Israa’iil Benny Gantz ayaa muujiyey sida uu uga xunyahay dilkani. “Waanu ka xunnahay shilkaasi lagu toogtay Iyad Halaq, waxaanu la wadaagaynaa muragada qoyskiisa, waxaan hubaa in degdeg loo baadhi doono go’aamana laga soo saari doono ” sidaasi ayuu u sheegay golaha wasiirrada Israa’iil Axadii. Toddobaadyadan xaalada ayaa kacsanyeed kadib markii Raiisal wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu sheegay inuu fulin doono go’aankiisa ah iney Israa’iil ku darsato qaybo kamida dhulka daanta galbeed ee Falastiin oo ay haysato. Maamulka Falstiniiyiinta ayaa kaga jawaabay inaany u hogaansami doonin heshiisyadii ay Israa’iil iyo Mareykanka kula jireen . Maryakanka ayaa taagersan in Israa’iil haysto qayb kamida daanta galbeed oo ay ku jiraan kuwa xaga aminga khuseeya Iyad Halaq ayaa malin walba waxaa uu ku lugeyn jiray inta u dhexeysa gurigooda oo ku yaalla degaanka Wadi al-joz xaafda qadiimka ah ee Elwyn El Quds halkaas oo ay ku taalo xaruun adeegyo gaar ah ay ka helaan Source
Wasiiro ka tirsan Somaliland oo laga helay CORONAVIRUS
Hargeysa (Caasimada Online ) – Wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa shaacisay in wasiiro ka mid ah xukuumadda Muuse Biixi laga helay cudurka Covid-19. Warbixin ka soo baxday wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in labo wasiir laga helay xanuunka, kadib markii lagu sameeyey baaritaano caafimaad. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay jiraan wasiiro kale oo Coronavirus laga baaray, balse laga waayey cudurka. Wasiirka maalgashiga Somaliland, Mudane Maxamed Axmed Cawad oo ka ka mid ah mas’uuliyiinta cudurka laga helay ayaa sheegay inuu isku arkay calaamadaha Covid-19, kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuuna xusay inuu is-karantiilay. Cawad ayaa intaasi ku daray in xaaladdiisa caafimaad ay wanaagsan tahay, islamarkaana uu ku jiro xaalad go’doon ah, si uusan feyruska ugu gudbin bulshada. Somaliland ayaa ka mid ah meelaha uu sida daran u saameeyey cudurka saf-mareenka ah ee Covid-19 oo fara ba’an ku haya qeybo badan oo ka mid ah dalka.
Wararkii u dambeeyay dhex-dhexaadinta Deni iyo Karaash
Madaxweynaha Dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan, ayaa sida qorshaysan maanta oo Talaado ah lagu kulansiinaya xarunta Madaxtooyada Garoowe, si loo xalliyo khilaafka u dhexeeya labada hoggaamiye. Qaar kamid ah Isimada Puntland iyo Guddoonka Baarlamanka, oo maalmihii u dambeeyay waday dhex-dhexaadinta Deni iyo Karaash, ayaa labada mas’uulba ku qanciyay in la is hor-fariisiyo, si loo dhammeeyo khilaafkooda. Isimada dhex-dhexaadinta waxaa kamid ah Islaan Ciise Islaan Maxamed, Garaad Saleebaan Garaad Maxamed, Boqor Cabdullaahi Axmed Cali Daba-gooye, Ugaas Maxamuud Cabdullaahi Ciise Nuur iyo Suldaan Siciid Maxamed Garaase. Isimada iyo Guddoonka Baarlamanka, ayaa maalmihii la soo dhaafay Madaxweyne Deni iyo Ku xigeenkiisa kulamo gaar-gaar ah la yeeshay, ka hor inta aysan ku ballamin kulanka Maanta oo Talaado ah la isku hor-fariisinayo labada mas’uul. Wixii Kulankaasi ka soo baxa kala soco Puntland Post The post Wararkii u dambeeyay dhex-dhexaadinta Deni iyo Karaash appeared first on Puntland Post.
Puntland oo shaacisay mowqifkeeda ku aadan doorashada 2020/2021-ka
Madaxweynaha Puntland, Siciid C/laahi Deni oo xalay Garoowe ugu warramay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020/2021-ka. Deni oo shaaciyey mowqifka maamulkiisa ee ku aadan doorashooyinkaasi ayaa sheegay in aysan ku kalsooneyn guddiga howsha wada ee lagu saleeyey nidaamka beelaha ee 4.5. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in Puntland aysan aqbali doonin dhammaan hanaanka doorashada Soomaaliya, haddii aan la tashi lagala sameynin. “Xubnaha Guddiga ah ee howsha loo dhiibay waa kuwo lagu keenay awood qaybsiga Beelaha 4.5, waxa aan ka digeynaa in nidaamka qabaliga ah laga dhigo Dastuur, Puntland waxa ay meel dheer ka taagan tahay ku kalsoonaanta guddi ama Hay’ado sharci dajin oo lagu saleeyay beelaha oo ah kuwo lasoo xulay oo aan ahayn kuwo la doortay in maslaxada dalka loo dhiibo.” ayuu yiri Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Ugu dambeyn Siciid Deni ayaa ku eedeeyey xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya inay ka gaabisay waxyaabo badan oo muhiim u ahaa doorashooyinka, islamarkaana ay wado marin habaabin sababi karta, sida uu hadalka u dhigay in dib loogu laabto halkii laga yimid. View the full article
Dibad-baxayaal ay Soomaali ku jirto oo lagu xir-xiray Mareykanka
Ugu yaraan 5,600 oo qof ayaa lagu qabtay magaalooyin ku yaal dalka Mareykanka tan iyo markii ay bilowdeen banaan-baxyadda looga soo horjeeday geerida George Floyd. Sidda lagu sheegay Warbixin ay daabacday Wakaaladda AP dhammaan dadkaan ayaa waxaa xiray Ciidanka Ilaaladda Qaranka oo bilaabay howlgal ay ku doonayaan in ay ku joojiyaan banaanbaxyadda. Qabqabashada ayaa imaaneysa iyadoo mudaaharaadyada magaalooyinka qaar ay noqdeen kuwo rabshado wata. Madaxweynaha Mareykanka ku booriyay booliiska iyo gudoomiyeyaasha in ay si xoog ah ku joojiyaan banaanbaxyadda. Magaalada Minneapolis, oo uu Floyd ku dhintey, ilaa 155 ayaa la qabtay. Qaar ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Mareykanka ayaa sameeyay qabqabasho tiro badan, oo ay ku jiraan ku dhawaad 800 magaalada New York iyo in ka badan 900 Los Angeles. View the full article
Guddoomiyihii hore ee G/ Banaadir oo ka hadlay maqaamka Muqdisho
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, ahaana Duqii Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) oo wareysi siiyey Shabelle ayaa si weyn u dhaliilay kuraasta 7 xubnood ee loo qoondeeyey in Muqdisho ay ku yeelato Aqalka Sare ee BF Soomaaliya. Madaale ayaa tilmaamay in arrintaasi ay tahay khalad hor leh oo laga galay caasimadda oo ay ku nool yihiin in ka badan saddex million oo dad ah. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in maqaam u sameynta Muqdisho ay noqon doonto caqabad ama xeen-daab aan laga gudbi karin, sida uu hadalka u dhigay. Halkaan hoose ka dhageyso codka. https://www.radioshabelle.com/wp-content/uploads/2020/06/Cod-sakariye-1.mp3 View the full article
Deni oo sheegay in Villa Somalia wado doorasho dalka ku celinaysa dagaal sokeeye
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, oo xalay khudbad ka jeediyay xarunta madaxtooyada caasimadda Garoowe, ayaa sheegay in xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay waddo qorshe halis ah, oo lagu marin-habaabinayo doorashada madaxtinimada dalka. Madaxweyne Deni, wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay, in mudadii ay jirtay dalka gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah, haatana ay waddo qorshe halis badan oo dalka dib loogu celinayo doorasho ku dhisan hannaanka 4.5, taasina aysan Puntland marnaba aqbali doonin. Mudane Deni, ayaa sheegay in qorshahaas ay Villa Somalia waddo uu dalka u horseedayo, in dib loogu laabto wadadii Soomaaliya ku burburtay, islamarkaana uu sababi karo khilaaf ay adagtahay in dib dambe la isu’gu soo noqdo. Madaxweynaha ayaa sheegay, in heshiiskii 2016 dhexmaray Puntland iyo dowladda Federaalka lagu go’aamiyay, in aan mar dambe dib loogu laaban doorasho ku salaysan nidaamka 4.5, isagoo caddeeyay in aysan Puntland mar kale yeeli doonin nidaamkaas. Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in haddii lagu laabto hannaanka 4.5 uu dalka dib ugu celin doono khilaaf siyaasadeed iyo colaad keenta isku dhacyo hubaysan, oo waddanka dib uga bilowday, taasina aan sinnaba loo aqbali Karin. Hoos ka daawo hadalkiisa PUNTLAND POST The post Deni oo sheegay in Villa Somalia wado doorasho dalka ku celinaysa dagaal sokeeye appeared first on Puntland Post.
Wasiiro ka tirsan Somaliland oo laga helay cudurka Coronavirus
Laba ka tirsan golaha wasiirada Somaliland ayaa laga helay cudurka faafa COVID-19 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka maamulkaasi. Sidoo kale waxa lagu soo warramayaa inay jiraan wasiirro kale oo laga baaray Coronavirus, balse laga waayay xanuunka. Wasiirka maalgashiga Somaliland, Mudane Maxamed Axmed Cawad ayaa shaaciyey in laga helay cudurka Covid-19, wuxuuna qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in haatan xaaladdiisa caafimaad ay fiican tahay. Somaliland ayaa ka mid ah meelaha uu sida weyn u saameeyay cudurka saf-mareenka ah ee Covid-19. View the full article
PUNTLAND oo si weyn uga hortimid qorshaha DF ee doorashada Soomaaliya
Garoowe (Caasimada Online) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni oo xalay hadal ka jeediyey Garoowe ayaa ka warramay marxaladda kala guurka ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020/2021-ka. Siciid Deni ayaa sheegay in aysan ku kalsooneyn guddiga howsha wada oo ay shaacisay in lagu saleeyey nidaamka beelaha ee 4.5, wuxuuna tilmaamay in Puntland aysan aqbali doonin dhamaan hanaanka doorashada Soomaaliya haddii aan la tashi lagala sameynin. “Xubnaha Guddiga ah ee howsha loo dhiibay waa kuwo lagu keenay awood qaybsiga Beelaha 4.5, waxa aan ka digeynaa in nidaamka qabaliga ah laga dhigo Dastuur, Puntland waxa ay meel dheer ka taagan tahay ku kalsoonaanta guddi ama Hay’ado sharci dajin oo lagu saleeyay beelaha oo ah kuwo lasoo xulay oo aan ahayn kuwo la doortay in maslaxada dalka loo dhiibo.” ayuu yiri Madaxweynaha maamulka Puntland. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay xildhibaanada labada Aqal iyo golaha wasiirada Soomaaliya ee ka soo jeeda Puntland aysan ku matalin hanaanka doorashada, maadaama aysan ku imaan doorasho shacab, balse lagu ay ku yimaadeen xulasho. Madaxweyne Siciid Deni oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyey xukuumadda federaalka Soomaaliya inay ka gaabisay waxyaabo badan oo muhiim u ahaa doorashada, islamarkaana ay wado marin habaabin sababi karta, sida uu hadalka u dhigay in dib loogu laabto halkii laga yimid. “Marin habaabinta Xukuumadda waxa ay dhalin kartaa in lagu kala tago nidaamka Dowladda oo aan ognahay halka uu ka yimid, sidoo kale waxa ay dib u dhigeysaa dalka oo waxaa ka dhalan karo khilaaf ay adkaantoodo in dib la isaga yimaado” ayuu yiri Madaxweyne Deni.” ayuu markale yiri, Siciid Cabdulllaahi Maxamed (Deni). Ugu dambeyn wuxuu ku baaqay in la gaaro heshiis siyaasadeed, ka hor inta aan la guda gelin howlaha doorashooyinka, si looga hortago khilaafaadyo hor leh oo yimaada.